Software updates – Windows – Page 17 – Vessoft
Software updates – Windows – Page 17
Hetman Partition Recovery 2.4 Standard iyo Portable
Saxannada Hoose ayaa ku haboon in la soo celiyo files si qalad ah la tirtiro ama laga badiyay. Software wuxuu taageeraa spectrum balaadhan oo ah qaybaha kala duwan ee nidaamka dib u soo kabashada xogta.
العربية, English, Українська, Français... Mailbird 2.1.34
E-mail Xoogbadane haboon macmiilka email inay la shaqeeyaan xisaab badan. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay ula adeegyo kala duwan oo online iyo codsiyada shaqeeyaan.
العربية, English, Українська, Français... Nymgo 5.5.26
Helitaanka Remote Software in la abuuro warbaahinta server dhamaystiran. Software wuxuu taageeraa helaan fog fog si ay files warbaahinta ka computer iyo qalab kala duwan.
Network Software in iskaan shabakadaha ee joogitaanka nuglaanshaha. Software wuxuu taageeraa noocyada kala duwan ee baaritaano ka iyo hubinta network ee size kala duwan ama kakanaanta.
العربية, English, Français, Español... Free Studio 6.6.1.119
English, Français, Español, Deutsch... Free Dailymotion Download 1.0.59.118
Downloaders Tool download videos adeega Dailymotion. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u soo bixi channels, playlists iyo diinta si qaabab loo jecel yahay.
العربية, English, Français, Español... Mumble 1.2.12